ETU Ị GA-ESI NWETA OGWE NCHỌGHARỊ GOOGLE NA NDABERE IGWE GAM AKPORO - ADỤ
Etu ị ga-esi nweta Ogwe Nchọgharị Google na Ndabere Igwe gam akporo
Site na mbido ihuenyo ụlọ (mgbe a na-agbanyeghị ya ọhụrụ) na ahụmịhe onye ọrụ n'ozuzu ya, enwere ihe ole na ole ejirila ngwaọrụ gam akporo. Ihuenyo mbu a nwere akara ngosi omenala 4 ma ọ bụ 5 dị mkpa na ọdụ ụgbọ mmiri, akara ngosi mkpirisi ole na ole ma ọ bụ folda Google dị n'elu ha, wijetị elekere / ụbọchị, na wijetị ọchụchọ Google. Ngwa wijetị ọchụchọ Google, nke ejiri ngwa Google, jikọtara ya ka anyị na-adabere kpamkpam na njin ọchụchọ maka ụdị ozi niile. Site na igwe ndọrọ ego ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ toụ findingụ kacha nso dị nso iji chọpụta ihe okwu pụtara, mmadụ nkezi na-eme ọ dịkarịa ala nyocha 4 ruo 5 kwa ụbọchị. N'iburu n'eziokwu na a na-eme ọtụtụ nyocha ndị a iji nweta nyocha ngwa ngwa, wijetị Google Search na-anọgide na-abụ ọkacha mmasị onye ọrụ yana emewokwa ka ọ dị na ngwaọrụ Apple malite na iOS 14.
Gam akporo os na-enye ndị ọrụ ohere ịhazi ihu ụlọ ha ka ọ bụrụ ihe masịrị ha ma wepu ma ọ bụ tinye wijetị dị iche iche, na ihe ndị ọzọ. Ndị ọrụ ole na ole na-ewepụ ihe nchọta nchọta Google iji nweta nhicha / ntakịrị ihu na naanị akara ngosi ụgbọ mmiri ha dị mkpa na wijetị elekere; ndị ọzọ na-ewepụ ya kpatara na ha anaghị eji ya oge niile na ọtụtụ na-ehichapụ ya na-akpachaghị anya. Ọ dabara nke ọma, iwebata wijetị ọchụchọ na ihuenyo ụlọ gam akporo gị bụ ọrụ dị mfe ma ga-ewe gị ihe na-erughị otu nkeji. Naanị soro ntuziaka ndị dị n'isiokwu a, ị ga-amụtakwa otu esi agbakwunye ogwe ọchụchọ Google ma ọ bụ wijetị ọ bụla laghachi na ihuenyo ụlọ gam akporo gị.
esi edozi ngwa nbipute na ọnọdụ njehie
Etu ị ga-esi nweta Ogwe Nchọgharị Google na Ndabere Home gam akporo?
N'ikwuru ya, ngwa wijetị ngwa ngwa Google jikọtara ya na ngwa nyocha Google, yabụ hụ na ị wụnyela ya na ngwaọrụ gị. Ngwa Google arụnyere na ndabara na ngwaọrụ gam akporo niile, belụsọ na ị wepụrụ ya, ekwentị gị ga-enwe ngwa ahụ. Mgbe ị nọ na ya, melite ngwa ahụ na nsụgharị ya kachasị ọhụrụ ( Google - Ngwa na Google Play ).
1. Laghachi na ntanetị gam akporo gị na pịa ogologo (pịa ma jide) na mpaghara efu . Na ụfọdụ ngwaọrụ, ị nwekwara ike tuo n'ime site n'akụkụ iji mepee menu nhazi ihuenyo ụlọ.
2. Omume a ga - eme ka nhọrọ nhazi ihu igwe wee pụta na ala nke ihuenyo ahụ. Dabere na njirimara onye ọrụ, a na-ahapụ ndị ọrụ ịmegharị ntọala ihuenyo ụlọ dị iche iche.
Mara: Nhọrọ nhọrọ nhazi abụọ dị na UI ọ bụla nwere ikike gbanwee akwụkwọ ahụaja ma tinye wijetị na ihuenyo ụlọ . Ọdịiche dị elu dịka ngbanwe grid desktọọpụ, gbanwee gaa na akara ngosi akara atọ, nhazi launcher, wdg. Dị na ngwaọrụ ndị ahọrọ.
3. Pịa na Wijetị imeghe menu nhọrọ wijetị.
4. Pịgharịa gaa na ndepụta wijetị dịnụ na Google ngalaba . Ngwa Google nwere ọtụtụ wijetị ihuenyo ụlọ jikọtara ya.
ọkwọ ụgbọala overran tojupụtara echekwa win 10
5. Iji tinye ogwe nchọta nke gugul na ihuenyo gi , naanị pịa ogologo na wijetị ọchụchọ ma debe ya na ebe ịchọrọ.
esi tinye nhọrọ hibernate na windo 10
6. Ndabara size nke search wijetị bụ 4 × 1 , ma ị nwere ike ịgbanwe obosara ya na mmasị gị site na ịpị ogologo na wijetị na ịdọrọ wijetị dị n’ime ma ọ bụ pụọ. Dị ka o doro anya, ịdọrọ ókè ahụ n'ime ga-ebelata wijetị nha na ịdọrọ ha ga-eme ka ogo ya dịkwuo elu. Iji mee ka ọ gaa ebe ọzọ na ihuenyo ụlọ, pịa ogologo na wijetị ma ozugbo ókèala pụtara, dọrọ ya n'ebe ọ bụla ịchọrọ.
7. Iji bugharịa ya na ngalaba ọzọ dọrọ wijetị na nsọtụ ihuenyo gị ma jigide ya ebe ahụ rue mgbe ogwe aka dị n'okpuru na-akpaghị aka gbanwee.
Ewezuga wijetị ọchụchọ Google, ị nwekwara ike ịtụle na-agbakwunye wijetị nchọta Chrome nke na-emepe emepe nsonaazụ ọchụchọ na taabụ ọhụrụ Chrome.
Wepu ihe ochicho Google site na gam akporo Homescreen
Etu esi egbusi ngwa gam akporo na-agba ọsọ na okirikiri
Etu esi ewepụta ndị otu na WhatsApp
Ọ bụ ya; ị dị nnọọ ike tinye Google search mmanya azụ na gị gam akporo home ihuenyo. Soro otu usoro ịgbakwunye na hazie wijetị ọ bụla na ihuenyo ụlọ.
windows store cache nwere ike mebie emebi windo 10
windo 10 na-emechi ruo mgbe ebighi ebi
jiri USB dị ka ebule windo 10
windo 10 update na-amalite
eri koodu eri rapaara na ngwaọrụ ọkwọ ụgbọala